Semalt: Zombie PC. Ihe Egwu Na-erughị Ala Iji Nchebe Ịntanetị
Ugbu a, zombies wakporo weebụ. Dịka ọmụmaatụ, na June 2004, a na - emepụta ihe ndị DOS na - agbawapụ na weebụ dịka Google, Yahoo, na Microsoft na PC zombie.
Nwapụta nke ikpuru dị ka MyDoom, Sobig, na Bagle egosila na e nweela usoro ndị ọzọ siri ike nke na-agbasa malware na usoro ndị a gụnyere itinye ígwè ọrụ zombie.
Zombie bụ kọmputa nke onye nke atọ jidere na-enweghị ihe ọmụma nke onye nwe ya. Ozugbo kọmputa wee ghọọ zombie, ọ bụ akụkụ nke netwọk Zombie ma ọ bụ botnet.
Ndị nche ọkachamara nke IT na-ekwu na a na-eji zombie machine eziga koodu obi na agha weebụsaịtị. Ọ nwere ike ịgbasa spam, igbaghasị ọrụ (DOS) ọgụ, zipu nsị phisher, ma gbasaa nje. A na-eziga ọtụtụ nke spam na-eji zombie igwe. Ndị na-awakpo nwekwara ike iji igwe zombie kpoo foto ndị gba ọtọ ma zipụ ọdịnaya kọmputa na-ezighị ezi. O doro anya na mgbe kọmputa mmadụ na-aghọ zombie, a na-awakpo nzuzo ha kpamkpam, a pụkwara ịzụta ozi gbasara onwe onye na nke ego iji mee ihe ọjọọ.
E nwere ọtụtụ ụsụụ ndị agha nke zombie. Dị ka ọ dị n'August 2014, ihe dị ka nde 150 Zombie PC gafee ụwa nọ n'ọrụ. Ihe ịma aka kasịnụ nke iyi egwu nke ịntanetị bụ na ndị nwe kọmputa nwere ike iji ha na-amaghị ihe na-eme.
Ịmara ma kọmputa gị ọ bụ zombie
O doro anya na ndị na-awakpo nwere ike iji kọmputa ọ bụla mee ihe ha chọrọ. Ọ naghị adị mfe mgbe niile ịmara ma eji PC gị eme ihe dịka igwe zombie. Jason Adler, Ọkachamara Onye Ọrụ Ntanetị Ndị Ahịa, na-atụ aro ịlele ihe mgbaàmà ndị a:
Njikọ eriri ngwa ngwa
keyboard ma ọ bụ òké ezipụghị
Ọrụ nrụgide siri ike
Ọtụtụ ọkwa ịba ụta na igbe mbata gị site na ndị bịara abịa
Ihe ndị ọzọ na-egosi na kọmputa gị nwere ike ịbụ zombie gụnyere ugboro ugboro, ihe nchọgharị weebụ na-emechi onwe ya n'ihi enweghị ihe kpatara ya na ọnwụ nke disk diski / flash nchekwa.
Otú ọ dị, mgbaàmà ndị a abụghị ihe doro anya na-egosi na kọmputa nwere oria. Kọmputa nwere ike igosipụta àgwà ndị a ma ghara ibute ọrịa.
Idebe nchekwa gị site na botnets
Mgbe a bịara n'ihe banyere nchekwa data ịntanetị, ọ dị mkpa ịghara ịdị na-ebuli mkpa ọ dị ịdebe ngwa ngwa. Ọ bụ ihe dị mkpa na Windows Update na-adịgide ruo oge. Ịnye nchekwa yana nchekwa nke ọma yana antivirus software ga-ebelata ibelata ikuku kọmputa na ngwanrọ ọjọọ nke na-agbasa site na zombie PC. Mgbasa ozi emelitere ga-enye nkwalite nchebe dị oke mkpa dịka nchebe site na ịnweta ohere PC.
Nchebe megide ọdịdị cybersecurity bụ usoro na-aga n'ihu - ịwụnye firewall, software antivirus enweghị ike ịmebe ihe nile metụtara nchekwa weebụ ruo mgbe ebighị ebi.
Na-ebute agbata obi-nche nchebe nke ịntanetị
Fred Felman, onye na-arụ ọrụ nchebe nke San Francisco, na-atụ aro na a ga-enyerịrị nche nchebe gburugburu ebe obibi. Ọ na-arụ ụka na dịka ndị mmadụ na-ele anya maka ọnọdụ ndị dị iche na agbata na ọdụ ụgbọelu, ha kwesịkwara ile anya maka àgwà ọ bụla dị njọ na netwọk. Na-eche igwe gị na ngwaọrụ ndị ọzọ mgbe niile na netwọk. Ọ bụrụ na enwere mgbanwe na arụmọrụ ya, ọ ga-achọ ịmatakwu nchọpụta iji chọpụta nsogbu ahụ dị mkpirikpi ngwa ngwa o kwere mee.